Windows XP Recovery - Repair Windows la Downlaods CD / USB o
> Resource > Windows > Sidee inuu ka soo kabsado Windows XP ka keydsho
Arrimaha Windows XP, waxaan u baahan tahay xog aan dhawrsan!
Waxaan u leeyihiin in ay isticmaalaan edition guriga cd XP daaqadaha soo kabashada sida aan nidaamka waxaa gebi ahaanba waayey ilaa. Waxaan sidoo kale u baahan tahay in dib-u-soo dajiyo darawallada iyo biilasha ka cd.
haddaan waxaas ku sameeyo waxaan waayi doono wax kasta oo muhiim ah files, waraaqaha, emails iwm? Waxaan u isticmaali Microsoft Office 2003
ayaan bilaabi iyocadhadii in hab nabad ah, shaashadda soo laakiin ka dib waxa laga fariisiyo oo anna ma aan heli karo.
Waad ku mahadsan tahay caawin ka hor.
Sida caadiga ah, si ay dib ugu Windows wax ku ool ah xal u heli karo badan oo arrimaha nidaamka, iyo waxa ay sidoo kale wax iska sahlan tahay in la sii waraaqaha aad dhawrsan. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad iyaga gadaal ka hor aad dib nidaamka qalliinka. Si kastaba ha ahaatee, waxa aan halkan ku shaqeeyo, maxaa yeelay, computer ka cad in aan la booted kartaa, oo aad u heli karin in ay nidaamka, taas oo macnaheedu ma aad dib kartaa wax ka kombiyuutarka. Reinstallation Taas waxaa la aan shaqayn odhan dib ma waxaad ka heli kartaa Window si caadi ah oo sii xogta dhawrsan. kabashada Windows XP sidaas samayn kara. Uma baahnid inaad reinstallation Windows hadda, laakiin a nidaamka kabashada Windows XP .
Sida loo sameeyo dib u soo kabashada Windows XP dib si aad u hesho wax si caadi ah?
Si aad u soo kabsado habka Windows XP, waxaad u baahan tahay disk kabashada Windows XP , kaas oo kaa caawin kara si aad kor your computer iyo hagaajin arrimaha keeni aad shil Windows. Guud ahaan, disk soo kabashada waa CD ama USB drive ah Downlaods in kabaha your computer la dhisay-in deegaanka pre-rakibidda, ka dibna waxaad ka shaqayn kartaa on your computer sida hoos nidaamka lagu rakibay ay adiga kuu gaar ah si uu u xaliyo arimo Windows.
Haddii aadan haysan ah soo kabashada disk for Windows XP , markaas Wondershare CD LiveBoot 2012 waxay noqon kartaa xulasho wanaagsan, oo waxaa loo isticmaalay by kun oo dadka isticmaala Windows aqrinayo arrimaha shil Windows sida screen buluug, shaashadda madow, screen freezed, iyo kuwa kale fariimaha baadi nidaamka. Tani CD boot / USB hagaajin iyaga oo dhan si guul leh. Waxaa ay mudantahay isku dayaya.
Step1. Guba CD Downlaods / USB drive
Marka degsado barnaamijka, waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa in la abuuro CD ah Downlaods ama USB la. Ma tani ma qaadan sida shaqo adag. Waxaad la rejeynayaa oo keliya si ay u diyaariyaan maran a disc CD ama USB drive. Iyaga Geli in computer ka oo ay maamulaan barnaamijka, waxa kaliya ee aad qaadataa hal talaabo si ay u gubaan CD ah Downlaods ama abuuro drive USB Downlaods. Marna ha ka fikiraan gubi ah, waxaa jira ka dhisay-in mid ka mid ah barnaamijka.
Step2. Ka Boot CD / USB kabaha your computer
Geli ka CD abuuray Downlaods ama USB drive in kombiyuutarka, bilowdo oo ay doortaan in ay u Boot ka LiveBoot. Bilowga ee bilowga ah, F12 jaraa'id si ay u dejiyaan kombiyuutarka booting ka USB ama CD-ROM, ka dibna waxaad ka heli doontaa menu boot this.
Step3. Bilow dib u soo kabashada Windows XP
Marka helaan deegaanka kabaha, ka heli LiveBoot oo taga si ay "Windows Recovery". Guud ahaan, sababta oo keena Windows oo diiday in ay kabaha kor u leedahay wax ka qaban shil kabaha ama shil loading. Waxaad xal halkan ka heli kartaa adigoo calaamado ah in aad computer ka tarjumaysaa. Dhammaan xal halkan waxaa lagu aaddiyaa Hanuuniyaa tallaabo cad. Just raaci inuu ka soo kabsado aad Windows XP.
Ka dib markii ay soo kabashada Windows XP , waxaad ka heli kartaa marar badan disc ee khaanada Downlaods ama USB iyo computerka aad sida caadiga ah. Markaas waxaad ka heli doontaa in aad ka heli kartaa Windows si habsami iyo xogta oo dhan waa dhawrsan.
Fiiro gaar ah: Ha ilaawin in la sameeyo hayaan for files muhiim ah si joogto ah si looga fogaado in mar labaad ka dhacaya.
Sida loo kabaha Vista la Windows Vista Boot digsi